Ilu 24 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Enwerela ndị ọjọọ anyaụfụ (1)
A na-eji amamihe arụ ụlọ (3)
Onye ezi omume nwere ike ịda, ma ọ ga-ebili (16)
Emegwarala ihe e mere gị (29)
Ihi ụra na-eme ka mmadụ daa ogbenye (33, 34)
24 Enwerela ndị ọjọọ anyaụfụ,Achọkwala ka gị na ha na-akpa,+ 2 N’ihi na ihe ha na-eche n’obi ha bụ otú ha ga-esi mesie mmadụ ike,Ihe ha na-ekwukwa mgbe niile bụ ihe ọjọọ ha ga-eme. 3 A na-eji amamihe arụ ụlọ,*+A na-ejikwa nghọta eme ka o sie ike. 4 Mmadụ na-eji ihe ọ na-amụtaEme ka ihe niile bara uru na ihe ọma niile ju n’ọnụ ụlọ ya dị iche iche.+ 5 Onye ma ihe na-akpa ike,+Ihe ndị ọ na-amụta na-emekwa ka ọ na-akpakwu ike. 6 Ezigbo ntụziaka ga-enyere gị aka ịlụ agha,+Ọtụtụ ndị ndụmọdụ ga-emekwa ka i merie.+ 7 E nweghị ihe ga-eme ka onye nzuzu nwee ezigbo amamihe.+ E nweghị ihe ọ ma ọ ga-ekwu n’ọnụ ụzọ ámá obodo. 8 A ga-akpọ onye ọ bụla nke na-akpa nkata ọjọọEze aghụghọ.+ 9 Nkata ndị nzuzu na-akpa na-eme ka ha mee mmehie,Ndị mmadụ na-akpọkwa onye na-akwa emo asị.+ 10 Ọ bụrụ na obi adaa gị mbà ma nsogbu bịara gị,Ike ga-agwụ gị. 11 Napụta ndị e du na-aga ka e gbuo,Zọpụtakwa ndị na-adagharị na-aga n’ebe a ga-egbu ha.+ 12 Ma ọ bụrụ na ị sị, “Anyị amaghị banyere ihe a,”Ọ̀ bụ na Onye na-enyocha obi amaghị ihe dị gị n’obi?+ N’eziokwu, Onye na-ahụ gị ga-ama,Ọ ga-akwụkwa onye ọ bụla ụgwọ ọrụ ya.+ 13 Nwa m, na-aracha mmanụ aṅụ maka na ọ dị mma. Mmanụ aṅụ nke si n’ụgbụgbọ aṅụ na-atapụta na-atọ ụtọ. 14 Marakwa na amamihe ga-abara gị uru.+ Ọ bụrụ na ị mara ihe, ihe ga-adịrị gị mma n’ọdịnihu,Ihe ndị ị na-atụ anya ha ga-emekwara gị.+ 15 Ezola n’akụkụ ụlọ onye ezi omume ka i mee ya ihe ọjọọ,Emebikwala ebe o bi. 16 N’ihi na onye ezi omume nwere ike ịda ugboro asaa, ma ọ ga-ebilicha.+ Ma ọdachi ga-eme ka ndị ajọ omume daa daruo ala.+ 17 Onye iro gị daa, enwela obi ụtọ. Ọ bụrụ na ọ zọhie ụkwụ, aṅụrịla ọṅụ.+ 18 Ọ bụrụ na ị ṅụrịa ọṅụ, Jehova ga-ahụ gị, ọ ga-ewutekwa ya,Ọ ga-akwụsịkwa iwesa ya* iwe.+ 19 Ewerela ndị na-eme ihe ọjọọ iwe. Enwerela ndị ajọ omume anyaụfụ, 20 N’ihi na ihe agaghị adịrị onye ọ bụla na-eme ihe ọjọọ mma n’ọdịnihu.+ A ga-emenyụ ọkụ* ndị ajọ omume.+ 21 Nwa m, tụọ egwu Jehova, tụọkwa egwu eze.+ Gị na ndị nnupụisi* akpala,+ 22 N’ihi na ọdachi ga-adakwasị ha na mberede.+ Ònye ma ụdị mbibi ha abụọ* ga-ebibi ndị nnupụisi a?+ 23 Ndị ma ihe na-ekwukwa, sị: Ile mmadụ anya n’ihu mgbe a na-ekpe ikpe adịghị mma.+ 24 Onye ọ bụla nke sịrị onye ajọ omume, “Ị bụ onye ezi omume,”+Ndị mmadụ ga-abụ ya ọnụ, mba dị iche iche ga-akatọkwa ya. 25 Ma ihe ga-agaziri ndị na-abara onye ajọ omume mba.+ A ga-eji ọtụtụ ihe ọma gọzie ha.+ 26 Ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu eziokwu mgbe ọ na-asa okwu, ndị mmadụ ga-akwanyere ya ùgwù.*+ 27 Hazie ọrụ gị dị n’èzí, kwadebekwa ihe niile n’ubi. I mechaa, rụọ ụlọ* gị. 28 Agbala akaebe na e nwere ihe onye agbata obi gị mere ma ọ bụrụ na i jighị n’aka na o mere ihe ahụ.+ Ekwula ihe ga-eduhie ndị ọzọ.+ 29 Asịla: “M ga-emegwara ya ihe o mere m. M ga-akwụ ya ụgwọ ihe o mere m.”+ 30 M gafere n’akụkụ ubi onye umengwụ,+N’akụkụ ubi vaịn onye na-enweghị uche. 31 Ahụrụ m na ahịhịa eruchiela ya. Ahịhịa akụwa* juru na ya,A kwatusịkwara mgbidi ya e ji nkume rụọ.+ 32 Ahụrụ m ihe a ma chebara ya echiche. M hụrụ ya wee mụta na 33 Ihitụ ụra, irotụ ụra,Na ịkụkụwatụ aka ka i zuo ike 34 Ga-eme ka ị daa ogbenye na mberede ka à ga-asị na onye ohi zuru gị ohi na mberede. Ị ga-adakwa ụkpa ka à ga-asị na mmadụ ji ngwá ọgụ bịa nakọrọ gị ihe niile i nwere.+
^ Ma ọ bụ “eme ka ezinụlọ sie ike.”
^ Ya bụ, onye iro gị.
^ Ma ọ bụ “ndị na-achọkarị ka a gbanwee ihe.”
^ Ya bụ, Jehova na eze.
^ O nwere ike ịbụ, “Ịsa okwu n’etinyeghị ya nnu na ose yiri isusu mmadụ ọnụ.”
^ Ma ọ bụ “wulite ezinụlọ.”
^ Ma ọ bụ “Ahịhịa ogwu.”